Ndabere iPhone Data ka Mac tupu upgrading ka iOS 7
> Resource> Mac> ndabere gị iPhone Data ka Mac tupu upgrading ka iOS 7
Apple ga ẹkedori iOS 7 on September 18 dị ka a free nweta nkwalite. Ma ị na-eche zuru version ma ọ bụ ịdị njikere iji wụnye iOS 7 beta na gị iPhone, ị ga-ndabere gị iPhone data ka Mac tupu upgrading ka iOS. Ma, ị ga-atụfu niile gị data, gụnyere oku log, kọntaktsị, kalinda na akaụntụ, foto, na ọzọ si gị iPhone. N'ezie, ọ bụghị ike kwado iPhone data ka a Mac. Ọ na-ewe gị a nkeji ole na ole ka ọrụ ahụ. Na-esonụ, m na-aga na-eso gị a ngwọta zuru ezu nkwado ndabere na mpaghara niile data gị iPhone na Mac.
Isiokwu a na-agụnye abụọ akụkụ: Part 1. ndabere iPhone ntọala, ozi, faịlụ na igwefoto Roll, wdg tupu upgrading ka iOS 7 Part 2. ndabere na-abụghị zụrụ media faịlụ site na iPhone ka Mac tupu upgrading ka iOS 7
Part 1. ndabere iPhone ntọala, ozi, faịlụ na Igwefoto Roll, wdg tupu upgrading ka iOS 7
Ka-amalite na kasị mkpa iPhone data: ntọala, kọntaktị, Igwefoto Roll, oku na-aga log, wdg Ka ndabere ndị a iPhone data, anyị kwesịrị iji iTunes na gị Mac. Ẹkedori iTunes na jikọọ na gị iPhone na Mac site na eriri USB. Mgbe ị na-iPhone-egosi na isi window nke iPhone, biko pịa View> Gosi sidebar. Na mgbe ahụ, gị iPhone na-egosipụta na n'aka ekpe nke iTunes Library n'okpuru Ngwaọrụ. Right pịa gị iPhone na họrọ Back Up si ndọpụta ndepụta. Site n'ime nke a, ihe niile ntọala gị iPhone na kọntaktị, kọntaktị ọkacha mmasị, Ozi, videos na foto na igwefoto Roll na-azọpụta on Mac.
Part 1 backups niile data gị iPhone gị Mac ma e wezụga media faịlụ, ma zụrụ na-abụghị zụrụ. N'ihi zụrụ songs na vidiyo, ị nwere ike abanye iTunes Store na gị Apple ID ibudata ha gị iTunes Library ọzọ. Nkwado ndabere na mpaghara na-abụghị iPhone zụrụ media faịlụ, gụnyere songs, videos, TV na-egosi, foto, ị kwesịrị ị na-eso nzọụkwụ na akụkụ 2.
Part 2. ndabere na-abụghị zụrụ media faịlụ site na iPhone ka Mac tupu upgrading ka iOS 7
Ebe ọ bụ na iTunes apụghị ndabere na-abụghị zụrụ media faịlụ site na gị iPhone ka Mac, ị ga-agbalị a-atọ ndị ọzọ ngwa. Ebe a ga-amasị m ike ikwu na ị na-agbalị Wondershare TunesGo (Mac). Ya-enye gị nkwado ndabere na mpaghara ọ bụla song, video, na foto site gị iPhone na Mac. Lee nzọụkwụ n'okpuru.
Nzọụkwụ 1. Wụnye iPhone ndabere software na Mac
Download Wondershare TunesGo (Mac) na gị Mac na wụnye ya. Ugbu a ọ bụ arụ ọrụ zuru okè na iPhones na Macs. Pịa ebe a ịhụ tech spec maka Wondershare TunesGo (Mac). Jikọọ gị iPhone na Mac site eriri USB. The TunesGo omume ga-chọpụta ya ozugbo. N'ihi na Windows ọrụ, download Wondershare TunesGo (Windows) ka ndabere iPhone data na PC.
Nzọụkwụ 2. ndabere media faịlụ site na iPhone ka Mac tupu upgrading ka iOS 7
Site na isi window, ị pụrụ ịhụ media faịlụ na-ota n'ime edemede. Na n'aka ekpe nke isi window, ị pụrụ ịhụ Music, iTunes U, Pọdkastị, ọbụna Memos gị iPhone. Foto ndị ke "Photos" windo. Na tiivi nakwa na Movies bụ n'ebe ahụ. Mepee kwekọrọ ekwekọ faịlụ window na họrọ mkpa media faịlụ, pịa "Export" ma ọ bụ "Mbupụ na iTunes" nkwado ndabere na mpaghara ndị a data si iPhone.
Age nke Alaeze Ukwu II maka Mac
Olee otú Download HTML 5 Videos na Mac